Save Burma | အာဏာရှင်စနစ် ကျဆုံးမှ တတိုင်းပြည်လုံး စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီကို ခံစားရမယ်
အာဏာရှင်စနစ် ကျဆုံးမှ တတိုင်းပြည်လုံး စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီကို ခံစားရမယ် Home
Save Burma (new link) http://saveburma.wordpress.com/
Release all political prisoners in Burma to buildatrue democracy
လက်ခုပ်တီးမလား၊ ဒါမှမဟုတ် လက်ဖျောက်တီးမလား World focus on Burma (28 January 2009) 27-`1-2009
Is Burma’s former Prime Minister Khin Nyunt to be freed soon? World focus on Burma (27 January 2009) 26-1-2009
World focus on Burma (26 January 2009) 25-1-2009
World focus on Burma (25 January 2009) President Obama’s inauguration address 24-1-2009
World focus on Burma (24 August 2009) Obama – the first 100 hours 23-1-2009
ထောင်ဒဏ်ကျနေသည့် လူငယ်ရှေ့နေ ဦးညီညီထွေး၏ အယူခံကို ပယ်ချ Centennial birthday of Myanmar’s former UN chief marked - Summary World focus on Burma (23 January 2009) လှဒါနီ ပြောချင်သေးတယ် 22-1-2009
World focus on Burma (22 January 2009) Is China’s influence on Burmese generals eroding? 21-1-2009
Burmese official downplays cold weather warning World focus on Burma (21 January 2009) မြန်မာဗိုလ်ချုပ်ကြီးများအပေါ် တရုတ်၏ သြဇာ မှေးမှိန်သွားပြီလော Barack Obama Video: Bush: It Is Good to Be Home 20-1-2009
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နှစ်သစ်ကူး နှိုးဆော်မှုကို လျစ်လျူရှူ မနေသင့် ရွှေဝါရောင်လှုပ်ရှားမှု ခေါင်းဆောင် ဦးဂမ္ဘီရ အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြ World focus on Burma (20 January 2009) Thai navy Vs Abandoned Boat-people from Burma and Bangladesh (5) 19-1-2009
Martin Luther King World focus on Burma (19 January 2009) Thai navy Vs Abandoned Boat-people from Burma and Bangladesh (4) 18-1-2009
World focus on Burma (18 January 2009) Thai navy Vs Abandoned Boat-people from Burma and Bangladesh (3) 17-1-2009
World focus on Burma (17 January 2009) Thai navy Vs Abandoned Boat-people from Burma and Bangladesh (2) 16-1-2009
Thai navy Vs Abandoned Boat-people from Burma and Bangladesh Video: Bush Says He Acted in Nation’s Best Interest World focus on Burma (16 January 2008) US slaps more sanctions on Myanmar regime backers 15-1-2009
Than Shwe’s bad omen at Zalun Pagoda World focus on Burma (15 January 2009) 14-1-2009
World focus on Burma (14 January 2009) 13-1-2009
World focus on Burma (13 January 2009) 12-1-2009
ပြည်သူလူထုနှင့် တပ်မတော်သား အားလုံးအတွက် အလွန်လိုအပ်နေတဲ့ ဒီမိုကရေစီ Global freedom on the slide: report World focus on Burma (12 January 2009) 11-1-2009
စစ်အစိုးရက နဖားကြိုးဆွဲခေါ်တိုင်း အန်န်အယ်လ်ဒီ မလိုက်နိုင် World focus on Burma (11 January 2009) 10-1-2009
World focus on Burma (10 January 2009) 9-1-2009
အခြေခံဥပဒေကို မပြင်မချင်း ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စ မစဉ်းစားဟု ဦးဝင်းတင် ပြောကြား NLD: နယ်အဖွဲ့ချုပ်ဝင်များက အဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုကို တက်ကြွစွာ ဦးဆောင်စေလို World focus on Burma (9 January 2009) 8-1-2009
Did Than Shwe’s Grandson Kidnap Model? ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များ နေအိမ်တွင်း ဝတ်ပြုခွင့် ပိတ်ပင် World focus on Burma (8 January 2009) 7-1-2009
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်အတွက် နှစ်သစ်သံန္နိဌာန် အစိုးရသစ် ဖွဲ့စည်းမည့် အစီအစဉ်အပေါ် သူတို့အမြင် ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် နိုင်ငံရေးကို ဒီလိုမြင်ကြ၊ ဆန္ဒပြုကြသည် စင်ပြိုင်အစိုးရတရပ် ဖွဲ့စည်းရန် အမျိုးသားကောင်စီ စီစဉ်နေပြီ (အင်တာဗျူး) World focus on Burma (7 January 2009) 6-1-2009
Karen Girl Raped and Killed by Burma Army Soldier World focus on Burma (6 January 2009) 5-1-2009
ခေါင်းဆောင်နွားလား ဖြောင့်ဖြောင့်သွားမှ နောက်နွားတသိုက် ဖြောင့်ဖြောင့် လိုက်မည် “ဖြေကြည့်ပါ” မေးခွန်းနှင့် အဖြေ World focus on Burma (5 January 2009) 4-1-2009
US: Statement on Burma’s Independence Day Burmese Democracy Elusive as Country Marks Independence World focus on Burma (4 January 2009) Zarganar, Hold on, We Know You Are Alive: Comedian of Burma Jailed for 45 Years 3-1-2009
အမျိုးသား ညီညွတ်ရေးကို ရှေ့ရှု လုပ်ဆောင်ရန် NLD ကြေညာချက်ထုတ် တိုက်တွန်း World focus on Burma (3 January 2009) 2-1-2009
Restless Souls of the Irrawaddy Delta World focus on Burma (2 January 2008) 1-1-2009
World focus on Burma (1 January 2009) ……………………………….
“We believe that the US will keep up its support for human rights and the democracy movement in Burma.” U Nyan Win, spokesman for the National League for Democracy (NLD)
“I don’t expect greater support from the US for political change in Burma. The most important forces for change in Burma are the Burmese people, opposition groups and ethnic leaders.”
Aye Tha Aung, chairman of the Arakan League for Democracy
“I want to urge the Burmese people: Don’t rely on Obama and [UN Secretary-General] Ban Ki-moon. We must rely on ourselves.”
Ludu Sein Win,aveteran Burmese journalist in Rangoon
Daw Aung San Suu Kyi, Winner of Trumpet of Conscience Award 2009
“Daw Aung San Suu Kyi epitomizes the ideals of this award. She isafreedom fighter and passionate advocate for the use of non-violent action against repression and military force. A dedicated practitioner of Buddhism,adedicated student of Gandhian principles andafollower of King’s teachings, Aung San Suu Kyi has led her followers in Burma to engage the repressor with calm, passion and collective conviction.”
”Act decisively in the interest of the nation and the people” General Aung San (Independence Hero in Burma)
These words on the new red banner, which Daw Aung San Suu Kyi put up in her house, can be viewed from the street.
“တိုင်းပြည်နဲ့ ပြည်သူလူထု အကျိုးကို ရှေးရှု၍ ပြတ်ပြတ်သားသား ဆောင်ရွက်ကြ”
ထောင်ချသော်လည်း ကြောက်ရွံ့နောက်တွန့်မည် မဟုတ် (အင်တာဗျူး) World focus on Burma (31 December 2008) The Best and the Worst of 2008: The World Thai Prime Minister Urges Political Unity to Face Economic Crisis Bangladesh Election Loser Says Vote Was Rigged, Star Reports 30-12-2008
World focus on Burma (30 December 2008) 29-12-2008
ဖြေကြည့်ပါ World focus on Burma (29 December 2008) 28-12-2008
World focus on Burma (28 December 2008) 27-12-2008
World focus on Burma (27 December 2008) 26-12-2008
Than Shwe, Voodoo and the Number 11 UN Passes Strong Resolution on Burma Human Rights Abuses World focus on Burma (26 December 2008) 25-12-2008
World focus on burma (25 December 2008) 24-12-2008
World focus on Burma (24 December 2008) Coup attempt in Guinea after dictator’s death 23-12-2008
Poor maternal health care widespread in eastern Burma World focus on Burma (23 December 2008) 22-12-2008
Word focus on Burma (22 December 2008) ဒီမိုကရေစီ ကျင့်ဝတ်တွေကို လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ လိုပြီ 21-12-2008
ဒေါ်စုကို အမျိုးသမီး ခေါင်းဆောင်များ ကောင်စီ ဂုဏ်ထူးဆောင် အဖွဲ့ဝင် ရာထား World focus on Burma (21 December 2008) 20-12-2008
World focus on Burma (20 Dcember 2008) 19-12-2008
ANALYSIS: Burma’s nuclear temptation —Bertil Lintner
World focus on Burma (19 December 2008) 18-12-2008
Junta-backed USDA unlikely to contest 2010 election Rwanda: UN-backed war crimes court sentences for genocide. World focus on Burma (18 December 2008) 17-12-2008
World focus on Burma (17 December 2008) လမ်းပြ 16-12-2008
World focus on Burma (16 December 2008) သိုဟန်ဘွားလိုမင်းနှင့် မင်းကြီးရန်နောင်လိုလူ
Video: Unity is Strength – Lion is not the king of the jungle. A postcard from prison Thai opposition leader elected PM စစ်အစိုးရသံအမတ်အား ကုလသမဂ္ဂမှ ဖယ်ရှားရန် စိန်ခေါ်ခြင်း အတွေးအခေါ် အရှုပ်အထွေးတွေကို ဖယ်ရှားပစ်ကြစို့
World focus on Burma (15 December 2008) 14-12-2008
World focus on Burma (14 December 2008) 13-12-2008
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရွေးချယ်မှု မရွေးချယ်မှု World focus on Burma (13 December 2008) 12-12-2008
Dirty list of foreign companies supporting the regime in Burma World focus on Burma (12 December 2008) Burma’s Nuclear Temptation Zimbabwe’s Mugabe wanted out 11-12-2008
World focus on Burma (11 December 2008) CORRECTED: U.S. to provide $5 mln more for Myanmar relief aid 10-12-2008
Human Rights Day, Bill of Rights Day, and Human Rights Week, 2008 World focus on Burma (10 December 2008) 9-12-2008
No Time Like the Present World focus on Burma (9 December 2008) 8-12-2008
World focus on Burma (8 December 2008) 7-12-2008
World focus on Burma (7 December 2008) 6-12-2008
World focus on Burma (6 December 2008) HIV/AIDS vigil focuses on prevention 5-12-2008
World focus on Burma (5 December 2008) 4-12-2008
World focus on Burma (4 December 2008) 3-12-2008
World focus on Burma (3 December 2008) NLD Leaders Discuss Role in 2010 Election 2-12-2008
တပ်မတော်နှင့်ပြည်သူကို သွေးခွဲနေသူ မိစှ္ဆာတစ်ဦး United States: Bush Signs Law on Child Soldiers World focus on Burma (2 December 2008) 1-12-2008
Thousands Die Needlessly Because Junta Spends Too Little on AIDS, Group Says World focus on Burma (1 December 2008) …………………………………………………….
“ပါတီများအနေနဲ့ တဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ပြီး၊ အပြန်အလှန်နားလည်ပြီး ညီညွတ်ရင် အကောင်းဆုံးပဲ။ တိုင်းပြည်အတွက် အရေးအကြီးဆုံး အခြေအနေဖြစ်နေတဲ့အတွက် နိုင်ငံရေးပါတီရော၊ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ထားတဲ့ အဖွဲ့တွေရော၊ ငြိမ်းချမ်းရေး မလုပ်ရတဲ့ အဖွဲ့တွေရော အားလုံးဟာ ဒီအချိန်မှာ ညီညွတ်ဖို့ စည်းလုံးဖို့ ဒါမှလည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံတော်သစ်ကို တည်ဆောက်လို့ရမယ်” “ညီညွတ်ရေးကို တည်ဆောက်ရာမှာ ယုံကြည်မှုက အရေးကြီးတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ နအဖ အာဏာပိုင်တွေဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးခွန်ထွန်းဦး၊ မင်းကိုနိုင် အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေးဖို့အတွက် တောင်းဆိုတယ်”
“တိုင်းပြည်မှာ ညီညွတ်ရေး မရှိဘဲနဲ့ ယိုယွင်းနေတဲ့ နိုင်ငံတခုကို ထူထောင်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ အင်အားစုတွေအားလုံး ညီညွတ်ဖို့လိုတယ်။ မကြိုက်တာတွေ၊ သဘောမကျတာတွေ ဘေးဖယ်ပြီးတော့ ညီညွတ်ရေးကို တည်ဆောက်ရမယ်။ ဒီလို မတည်ဆောက်ရင်တော့ ဒီ့ထက်ပိုဆိုးနိုင်တယ်”
(စီအာပီပီ အတွင်းရေးမှူး ဦးအေးသာအောင်)
“သူတို့ဘာသာလုပ်တဲ့ သဘောပဲ။ အန်ကယ်တို့အနေနဲ့ စည်းရုံးရေးဆင်းဖို့ ဆန္ဒမရှိဘူး။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို လက်မခံဘူး။ နအဖ အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ တရားဝင် ရပ်တည်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာ မလုပ်ဘူး၊ အပေးအယူ မလုပ်ဘူး၊ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို မပြင်ဘူးဆိုရင် ရွေးကောက်ပွဲဝင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဖွဲ့စည်းပုံ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင် ရွေးကောက်ကို ၀င်ဖို့ စဉ်းစားမယ်။ ဘာတွေပြင်မှာလဲ၊ ဘယ်လိုပြင်မှာလဲ ဆိုတဲ့အပေါ်မှာ ပြန်စဉ်းစားမယ်”
“လူတိုင်း ၀ိုင်းလုပ်ပေးလို့ ကျနော် အသက်ရှည်လာတာဗျ။ ထောင်ထဲမှာက အသက်ရှည်နိုင်စရာ မရှိဘူး။ ဒီအစိုးရရဲ့ ဖိနှိပ်မှုတွေ ချုပ်ချယ်မှုတွေ ခံနေရတာ။ ဒါတောင် ကျနော် ညှဉ်းဆဲခံရတာတွေ ထည့်မပြောသေးဘူး။ ဒီအစိုးရ ဒီလောက်ကြပ်မတ် ချုပ်ချယ်ထားတဲ့ အထဲမှာ တယောက်ထဲ ပိတ်နေတဲ့အခါတွေမှာ ကျနော် အသက်ရှည်စရာအကြောင်း မရှိဘူး။”
“ထွက်ထားတဲ့ လူငယ်ဆိုပေမယ့်လည်း ကျနော်ကတော့ ထွက်ထားတဲ့ လူငယ်လို့ သဘောမထားဘူး။ ကျနော်ကတော့ ဒါ အန်အယ်လ်ဒီအတွင်းမှာ ရှိနေတဲ့လူတွေပဲ။ ဒါတွေက ကျနော်က ဖက်ထားတဲ့ လူတွေ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျနော်က သူတို့ ပြဿနာတွေကို မဖြေရှင်းပေးနိုင်ဘူး။
“မပေးနိုင်တော့ ကျနော်က ဖက်ထားတယ်။ မင်းတို့ ဒီကနေထွက်ချင်တာလား ဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ ငါတော့ မင်းတို့ကို ဖက်ထားမယ်။ မင်းတို့ဟာ ထွက်ထားတဲ့ လူတွေ ဘာတွေ ပြောပြော မင်းတို့ဟာ ထုတ်ထားတဲ့လူတွေ မဟုတ်ဘူး။ မင်းတို့ကို ပြန်လည်ညီညွတ်ရေးလုပ်ရအောင် ငါ့မှာလည်း နိုင်ငံရေးသြဇာ မရှိဘူး။ အင်အားလည်း မရှိဘူး။ သို့သော် ငါထင်တယ်။ ငါမင်းတို့ကို ပိုက်ထွေးထားတဲ့ အားပဲ ရှိတယ်။ အဲလိုလုပ်ရတဲ့ အကြောင်းက ဘာလဲဆိုတော့ ဒေါ်စုလာရင် ဖြေရှင်းကြမယ်ပေါ့။ ဘာလို့ဆိုတော့ ဒေါ်စုက နိုင်ငံရေး သြဇာရှိတယ်။ အင်အားရှိတယ်။ အဲဒီ အခါကျရင် သူ့သြဇာ။ သူ့နိုင်ငံရေး အင်အားနဲ့ သူတို့ အခု ဖြစ်နေတာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကျနော် ထင်တယ်။ ကျနော်က ပိုက်ထွေးထားနိုင်တယ်လို့ ကျနော် ယုံတယ်လေ။ ”
“(ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားနေတဲ့ သူတွေကို) ကျနော်ကတော့ အားလုံး ညီညီညွှတ်ညွှတ် လုပ်စေချင်ပါတယ်။ အသံညီရမယ်ပေါ့ဗျာ။ လုပ်နေတဲ့သူတွေ အားလုံး တယောက်တပေါက် မဟုတ်ဘဲ တသံထဲ ထွက်မယ်၊ အလုပ်ညီမယ်ဆိုရင် ကောင်းတာပေါ့ဗျာ။ အခုက အသံ မညီနိုင်သေးတော့ ပြဿနာတွေ ရှိတာပေါ့ဗျာ။ ဒါက ဒီစစ်အစိုးရကလည်း ဒီလိုဖြစ်အောင် လမ်းကြောင်းတွေ ချနေတာဗျ။ အကွဲအပြဲတွေကို လိုက်ဖန်တီး မျိုးစေ့လိုက်ချနေတာဗျ။ ဒီတော့ ကျနော် ပြောချင်တာက အားလုံးပေါ့ဗျာ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပက အဖွဲ့တွေ အားလုံးကို ပြောချင်တာက ကျနော်တို့ အသံညီညီနဲ့ လုပ်ကြရအောင်လို့ပါ။”
“ဒီအခြေခံဥပဒေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ၀င်လိုက်မယ်ဆိုရင် လူသတ်လိုင်စင်ပေးတဲ့ ဥပဒေ ဖြစ်နေတယ်။ ကိုယ့်ကို သတ်ပါလို့ ပြောနေတဲ့ အတိုင်းပဲ။ ဒါကြောင့် ဒီဟာကို လုံးဝ လက်မခံဘူး။ အန်တီတို့က အခြေခံ ဥပဒေမှာထဲက ဆန့်ကျင်ခဲ့တာ အခုလည်း ဆန့်ကျင်အုံးမယ်”
“နိုင်ငံရေး လုပ်စားသူတွေနဲ့ နိုင်ငံရေးကို တကယ်လုပ်တဲ့ လူတွေက တကယ့်ကို ကွာတယ်။ အခု ရွေးကောက်ပွဲကို ဘာကြောင့်မို့ ၀င်ရမှာလဲ။ ၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲ နိုင်တာတောင်မှ လွှဲမပေးတဲ့ ကိစ္စပဲ။ အခုတခါ အန်အယ်ဒီ ၀င်ပြိုင်လို့ နိုင်ရင်လည်း အန်အယ်ဒီ မရဘူး။ ဒီအခြေခံဥပဒေအတိုင်း ၀င်ပြိုင်မယ် ဆိုရင်လည်း ဘယ်နိုင်ငံရေးသမားကောင်း ဖြစ်မလဲ။ ကိုယ်တိုင်းပြည်ကို သေတွင်းထဲပို့တာနဲ့ အတူတူပဲ။ နဂိုမှ မသေမရှင် ဖြစ်နေတဲ့ဟာကို သတ်ပစ်လိုက်တာနဲ့ တူနေတယ်”
မကွေးတိုင်း ရေနံချောင်းမြို့နယ် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ခင်စောဌေး
“The international community and the United Nations Security Council must not remain silent as the regime demonstrates yet again its contempt for universal freedoms and its disdain for the international community’s calls to release all political prisoners.”
<!–[if gte mso 9]> Normal0MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]–> နေဘုန်းလတ်
သမိုင်းကိုဖျောက်လို့ မရဘူး။ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်း အန်တီတို့မြို့မှာ အဖွဲ့ချုပ်ရုံးက ပိတ်ထားရပေမယ့် ရုံးမှာ ဆိုင်းဘုတ်ကြီး ကပ်ထားတယ် - “အခြေခံ လူ့အခွင့်အရေးကို အာမခံတဲ့ အစိုးရတရပ် ပေါ်ထွန်းရေးသည် အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက် ဖြစ်သည်”ဒါကြောင့်မို့လို့ ဘယ်သောအခါမှ အာဏာရှင်စနစ်ကို ပြန်လည် မပေါ်ထွန်းအောင်၊ အခြေခံ လူ့အခွင့်အရေး အာမခံတဲ့ အစိုးရတွေ ပေါ်ထွန်းအောင် လုပ်ဖို့က အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက် ဖြစ်သလို ကျမတို့ကလည်း ဒီရည်ရွယ်ချက်အတိုင်း လုပ်နေတာ။ကော်မရှင်အဖွဲ့နဲ့ ကျမတို့ကို တွေ့ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့် ကော်မရှင်အဖွဲ့အနေနဲ့ ကျမတို့ကို ဒီနေ့ထိ ခေါ်ခေါ်တွေ့နေတာကိုက ၉ဝ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲကို အသိအမှတ်ပြုနေတယ်။ ၉ဝ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲကြောင့် ကျမတို့ပါတီကလည်း အသက်ရှင်လျက် ရှိတယ်ဆိုတာ သက်သေပြတဲ့အနေနဲ့ ကော်မရှင်အနေနဲ့ ဖိတ်ခေါ်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
(ဒေါ်ခင်စောဌေး – ဒုဥက္ကဌ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ရေနံချောင်းမြို့နယ်)
အခြားနိုင်ငံများက မြန်မာနအဖအပေါ် ချမှတ်ထားသော စီးပွားရေး ပြစ်ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့မှုများ (Sanctions)ကို ပပျောက်သွားအောင်၊ ရုပ်သိမ်းသွားအောင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က နအဖ အစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုကြောင်း အဆိုပြုခဲ့သည်။ သို့သော် ယနေ့အချိန်ထိ နအဖဘက်မှ မည်သည့်တုံပြန်ချက်မျှ မရသေးပါ။
(နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ချထားခံနေရသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ၂ဝဝဂ ဇန်နဝါရီလတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင်များက သွားရောက်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးစဉ် )
အမေရိကန်တို့ ဥရောပတို့က ပိတ်ဆို့မှု လုပ်ထားတဲ့ဟာကို ဖျက်ဖို့ဆိုတာ သိပ်လွယ်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တကွ နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံပြီးတော့ ဆွေးနွေးလိုက်ရင်ကိုပဲ ဒီ Sanctions တွေဟာ အလိုလို ပျောက်ပျက်သွားလိမ့်မယ်လို့ ကျနော်တို့ ဒီလိုပဲ ယုံကြည်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ နိုင်ငံရေးသမားပဲဗျ၊ နိုင်ငံရေး ဆက်လုပ်ရမှာပေါ့။ NLDရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေ၊ ရပ်တည်ချက်ရော၊ ဘာရောညာရော ကျွန်တော် သဘောကျနေတယ်။ အဲဒီတော့၊ ကျွန်တော် NLDနဲ့ပဲ လုပ်မှာပဲ၊ ကျွန်တော်တို့ လုပ်မှာကတော့ နိုင်ငံရေး နည်းနဲ့ လုပ်မှာပဲ။ သို့သော် အဲဒီထဲကနေ နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့ဟာက ဒါ အကြမ်းဖက်မှုကို အားပေးတယ်တို့၊ မပေးတယ်တို့ စွဲချက်တွေကတော့ အမျိုးမျိုး ဖြစ်နိုင်တာ။ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ ကျွန်တော် နိုင်ငံရေးပဲ ဆက်လုပ်မယ်၊ ကျရာနေရာက လုပ်မယ်။ ပေးရာ တာဝန်ကလုပ်မယ်။
U Win Tin, Burma’s longest political prisoner, spent over 19 years in the notorious Insein Prison. He was unconditionally released today (23-9-2008) with other 9001 prisoners. This time, only few political prisoners were granted amnesty by the Burmese junta.
(In picture, U Win Tin was still wearingaprisoner’s uniform in spite of being outside the prison.)
နိုင်ငံရေးသမားကြီး ဦးဝင်းတင် ထောင်သက် (၁၉)နှစ်ကျော် အကြာမှာ ချွင်းချက်မရှိ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပါပြီ။ ဆက်လက်ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခံထားနေရတဲ့ အခြားနိုင်ငံရေး အကျဉ်းသမားများအားလုံးလည်း ဦးဝင်းတင်ကဲ့သို့ ချွင်းချက်မရှိ ပြန်လည် လွတ်မြောက်သင့်ပါသည်။
နအဖအနေဖြင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသမားများကို အမြန်ဆုံး လွှတ်ပေးရန် ဆက်လက် လိုအပ်နေပါသေးသည်။
တချိန်တည်းမှာပင် မြန်မာပြည်သူ လူထုတရပ်လုံး ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုအောက်မှ လွတ်မြောက်အောင်လည်း နအဖက အဓိက တာဝန်ရှိစွာ အမြန်ဆုံး လုပ်ဆောင်ပေးရပါဦးမည်။
အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို ဦးတည်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များ ဖြစ်လာရန် မျှော်လင့်ပါသည်။ သို့မှသာ မြန်မာလူမျိုးအားလုံး စည်းလုံးညီညွတ်စွာဖြင့် ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံသစ်ကြီးကို အမြန်ဆုံး ပြန်လည် တည်ဆောက်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ လက်ဆင့်ကမ်းအမွေကတော့ အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းမှာ အခုချိန်ထိ အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ရေး လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေ ရှိနေရဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အထင်ရှားဆုံးတွေထဲက တခုကတော့ ၂ဝဝရ ခုနှစ် ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး (Saffron Revolution) ဖြစ်ပါတယ်။ မျိုးချစ်စိတ် လုံးဝမရှိတဲ့၊ သာသနာဖျက် နအဖ အာဏာရှင် လူရမ်းကားတွေရဲ့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုဟာ မြန်မာ့သမိုင်းမှာ ဘယ်တော့မှ ဖျက်မရနိုင်တဲ့ အမဲစက်ကြီး ဖြစ်နေပါပြီ။
တကယ် အကြမ်းဖက်သမားတွေက သန်းရွှေ စစ်အစိုးရပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၈၈ ပြည်သူ ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံကြီးကို အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းခဲ့တဲ့အတွက် ရဟန်းရှင်လူ ၁ သောင်းလောက် သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ ဒီပဲယင်း အရေးခင်းမှာ ဒေါ်စုကို လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်။ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဝင်တွေ လူမဆန်စွာ အသတ်ခံခဲ့ရတယ်။ နယ်စပ်ဒေသမှာ လူမျိုးစု တိုင်းရင်းသား ရွာတွေ မီးရှို့လူသတ် မုဒိမ်းကျင့်မှုတွေကို အဆက်မပြတ် ကျူးလွန်ခဲ့ကြသူတွေ ဖြစ်တယ်။၂ဝဝ၇ ခုနစ်မှာ သံဃာတွေကို သတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။ ၂ဝဝ၈ ခုနစ်မှာ ဧရာဝတီတိုင်းက လေဘေး ဒုက္ခသည်တွေ ၁သိန်းကျော် သေခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်ကြီးမှာ အသက်မသေ ကျန်ရစ်သူ ယောင်္ကျား၊ မိန်းမ၊ ကလေး ၊ သံဃာ ၂ သန်းကျော်ရဲ့ အသက်ကို အချိန်မှီ ကယ်တင်ခြင်း မလုပ်ဘူး။ နိုင်ငံတကာ လူမှုရေးအကူညီတွေ နှောင့်နှေးအောင်လုပ်ပြီး လူတွေရဲ့ အသက်ကို ဇီဝိန်ချွေခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် နအဖ စစ်အစိုးရသာ အကြမ်းဖက်သမားအစစ် ဖြစ်ပါတယ်။
‘သား အရှင်ဂမ္ဘီရနဲ့ သား မောင်ကျော်ကျော် အပါအဝင် တခြားလူတွေအားလုံး အခုလို (အကျဉ်း)ကျနေတဲ့လူတွေ အားလုံး လွတ်မြောက်ပါစေ’
( ဦးဂမ္ဘီရ၏ မယ်တော်ကြီး)
‘သူခိုးဓားပြထက် တော်လှန်ပုန်ကန်မယ့် လူငယ်တွေကို ပိုပြီး ကြောက်လို့ လုပ်တာ’
နအဖ အနေဖြင့် နိုင်ငံရေး ပဋိပက္ခများကို အကြမ်းမဖက် ငြိမ်းချမ်းသော နည်းလမ်းများဖြင့် ဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းရန် ကြိုးပမ်းနေသော မျိုးဆက်သစ် ကျောင်းသား လူငယ်များအား ယခုလို မတရား ဖမ်းဆီးနေခြင်းကို ရပ်တန့်ရန်၊
ထို့အပြင် ယခင်ကတည်းက ဖမ်းဆီးထားသူများကိုပါ အမြန်ဆုံး ပြန်လွှတ်ပေးပြီး နိုင်ငံရေး ပြဿနာကို လူကြီး လူကောင်းဆန်စွာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ဖြေရှင်းပေးရန် အလေးအနက် တောင်းဆိုကြောင်း
(ရန်ကုန်အခြေစိုက် မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များ အစည်းအရုံး Generation Wave (GW))
“From now on, we will do everything according to the law”
ခေတ်သစ် ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ တန်ဖိုးတွေကို အလေးအနက်ထားတဲ့ ကျင့်စဉ် ဖြစ်သလို ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ် (ပြည်သူတွေက ရွေးချယ် တင်မြှောက်ထားတဲ့ အစိုးရ၊ လွှတ်တော်အမတ်) တွေက လူမှုရေး ပဋိပက္ခတွေကို ပြေလည်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ဖို့၊ ပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်း လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ဖို့ ကျင့်စဉ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Real fighters for democracy as well as activists for human rights in Burma are repeatedly and unlawfully arrested, imprisoned, remanded in custody, placed under house arrest, persecuted, sent to labor camps or disrobed if being monks. Under the junta, Burma lacks rule of law. How can the current regime transform its dictatorship into democracy?
For 2008 December title-page, clikc here. For 2008 November title-page, click here.
For 2008 October title-page, click here.
For 2008 September title-page, click here. For 2008 August title-page, click here.
For 2008 July title-page, click here.
For 2008 June title-page, click here.
For 2008 May title-page, click here.
Like this:Like Loading...	Written by Lwin Aung Soe May 8, 2008 at 6:43 am
Tainted milk - toxic
မဲဆောက် မြန်မာပြည့်တန်ဆာ မိန်းကလေးများဘဝ တစေ့တစောင်း Condolence for Revered Journalist U Thaung (Burmese) ကြေးမုံဦးသောင်း ကွယ်လွန်ခြင်းအတွက် ဝမ်းနည်းသဝဏ်လွှာ
Mizzima (Burmese)ပြည်ထောင်စုအဆင့် တက်နိုင်ရန် အပစ်ရပ် ခိုင်မာဖို့လိုဟု KNU ပြော August 6, 2012အိုလံပစ် ပြိုင်ပွဲဝင် မြန်မာအားကစားသမားများ ရလဒ်များ မကောင်း August 4, 2012ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်ပြီး ရန်ကုန်ပြန် August 20, 2011ICC အမြန်ရောက်လိုသူ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ဦးထူးထူးဟန် July 20, 2011နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၃၆ ဦး လွတ် May 17, 2011ပုဂံလက်ဆော့ March 1, 2011အင်းစိန်ဗုံး ၈ ဦး ဒဏ်ရာရ February 28, 2011မြသန်းတင့် ကွယ်လွန်ခြင်း ၁၃ နှစ်ပြည့် February 23, 2011 VOA (မြန်မာ)An error has occurred; the feed is probably down. Try again later. စည်းလုံးခြင်းရဲ့အင်အားAn error has occurred; the feed is probably down. Try again later.လူထုအသံ	RFA (Burmese)မလေးရှား မြန်မာသံရုံးရဲ့ ထိရောက်တဲ့ အကူအညီရဖို့ သမ္မတထံ တောင်းဆိုမွန်ပြည်နယ်က မူးယစ်ဆေးဝါး ပြဿနာဖြေရှင်းပေး ဖို့ တောင်းဆို ဗြိတိန်ပူးပေါင်းရေးဝန်ကြီး ရခိုင်ပြည်နယ် ဒုက္ခသည် စခန်းတွေကို သွားရောက်လေ့လာဆင်ဖြူတော်ငှားဖို့ ထိုင်းရဲ့ ကမ်းလှမ်းချက် မြန်မာ ငြင်းဆန်တောင်ကိုရီးယားရဲ့ တိုးတက်ရေး ကြိုးပမ်းမှု အတွေ့အကြုံ မြန်မာကို မျှဝေမည်၆၈ နှစ်မြောက် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် မွေးနေ့ပွဲ ကျင်းပ Burma Digest InfoAn error has occurred; the feed is probably down. Try again later. Mizzima (English)An error has occurred; the feed is probably down. Try again later. BBC (Burmese)အဏုမွူ မပွနျ့ပှားရေး အိုဘားမား တောငျးဆိုထိုငျးက မွနျမာ ဆငျဖွူတျော ငှားရမျးဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ မှေးနေ့ ကငျြးပ RSF AsiaAn error has occurred; the feed is probably down. Try again later. CNN WorldMalala's voice stronger, not silenced May 8, 2013The attack was meant to silence the outspoken teenager who dared to defy the Taliban's ban against girls in school. Instead, it only made Malala's voice more powerful. Afteraschool year that started withashooting, Malala now eyesasummer of speaking at the U.N., telling her story inanew book and amplifying the issue of girls education.Fighting for the 'throwaway' girls June 13, 2013Less than half of U.S. teen moms graduate high school. And Principal Asenath Andrews believes that'saslow death for them by lack of opportunities. "In other countries, we scream at people about throwing away girls, but we [do it], too; we just kill them slowly."Impact Your World: How to help June 18, 2013CNN Films' "Girl Rising" tells the stories of girls across the globe and the power of education to change the world. Are you inspired to help the cause of girls' education around the world? You can make an impact in many ways, but by just being aware of the issue, you can spread the word. By acting in your own community, you can makeagl […]Photos: Beyoncé rocks for girls education June 18, 2013When cooking can kill June 13, 2013For nearly half of the world's population, building and maintainingafire isadaily -- and often deadly -- chore.'I'm notawelfare mom, I'masoldier' June 7, 2013Jaspen Boothe is committed to helping out homeless female veterans.Wildlife's worst enemy? Us May 30, 2013Mona Rutger got the call in October: A bald eagle was flopping around on an airport runway after it had been clipped byaprivate jet. Unfortunately, it's something she sees all too often.Troubled youth run 'old skool' bistro May 17, 2013Asajuvenile corrections officer in Southern California, Teresa Goines found it rewarding to work with troubled youth and help them turn their lives around. IPS Top newsZanzibar’s Encroaching Ocean Means Less Water June 12, 2013Scales Tip Towards Women in Jewish Religious Rights Struggle June 12, 2013Cairo’s Poor Convert Kitchen Waste Into Fuel Savings June 12, 2013Globe Less Peaceful Than Five Years Ago – Report June 12, 2013U.S. Regulatory System “Stymied by Special Interests” June 12, 2013Q&A: U.N. Looks to High Seas to Alleviate Food Crisis June 11, 2013Labour Violations Under Tight Wraps in Thailand June 11, 2013OP-ED: Are We at the Tipping Point for Ending Hunger and Malnutrition? June 11, 2013Meta	Register	Log in